Takelaka fenoina hanendrena izay ho “GVer-n’ny herinandro” · Global Voices teny Malagasy
Takelaka fenoina hanendrena izay ho “GVer-n'ny herinandro”
Alefanay indray ny andiam-blaogy manasongadina ireo mpikamban'ny vondrom-piarahamonina!
Voadika ny 19 Oktobra 2020 2:31 GMT
Ampiasao ny takelaka etsy ambany hanolorana olona izay heverinao fa tokony hasongadina ao amin'ny andian-dahatsoratra blaogy “GVer of the Week”! Handefasana fanontaniana vitsivitsy mba ho fenoin'ny mpandray anjara ary havadika bilaogin-dahatsoratra eto amin'ny tranonkalan'ny Vondrom-piarahamonina izany.
Tianay tokoa raha toa ny Toniam-paritra, ny Mpitantana ny Fandikan-teny Lingua, ny Ekipa Fototra na ireo mpikambana hafa ao amin'ny Vondrom-piarahamonina no manendry ny GVers avy amin'ny ekipany mba hasongadina, koa miangavy anareo hijery olona iray izay tianareo ho fantarina bebe kokoa ny momba azy!
4 ora izayHafanàm-po nomerika